Zhizha Kufamba Mwaka Unotanga: Kumeso Kuvhara, Zvinyorwa uye Kusvika Kwakakodzera Nguva Kwakakosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Zhizha Kufamba Mwaka Unotanga: Kumeso Kuvhara, Zvinyorwa uye Kusvika Kwakakodzera Nguva Kwakakosha
nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba nendege muzhizha 2021 inoda kuve yakarongwa zvakanaka. Frankfurt Airport inodaidzira vafambi 'vanoshanda vanotsigira.
Vanhu vazhinji vari kushuvira kumutsidzira kwavo marwendo ekufamba. Kudiwa kwendege, kunyanya, kuri kukura. Sezvo mwaka wekufamba wezhizha unotanga, Airport yeFrankfurt kuGerman inofungidzira kukwira kukuru kwenhamba dzevatakurwi uye inotarisira kugamuchira vafambi vanosvika zviuru zana zuva nezuva.
Kana tichienzanisa, muzhizha re2019 - pasati patanga denda - yepamusoro zuva nezuva vhoriyamu yaive inopfuura 240,000.
Fraport, iyo kambani inoshanda kuFrankfurt Airport, yapindura nekukurumidza kune iyo rebound uye yakavhura zvakare Terminal 2 kudzivirira kuwanda. Matanho ekudzivirira hutachiwana, senge anosungirwa kumeso kufukidza uye kure kure kwenzanga, zvinoramba zviripo. Nekudaro, vafambi vachazoda kutamba chikamu chavo nekunyatso ronga nzendo dzavo, uye kuva nezvinyorwa zvese zvakakodzera kuti vape.
Daniela Weiss weboka revatariri vezviteshi zveFraport anotsanangura kuti: "Kunyangwe denda risati rasvika, kufamba nendege kwaisanganisira kutevedzera mitemo yakasiyana - iyo ichiri kushanda nhasi. Asi Covid-19 yakaona shanduko kune akati wandei maitiro, uye mamwe ave kutora nguva yakawanda semhedzisiro. " Weiss anotsanangura kuti, kunyangwe paine huwandu hwakaderera pakuenzaniswa nemakore apfuura, vafambi vanogona kushandisa nguva yakawanda mumutsara: "Asi nekuita gadziriro dzakakodzera, munhu wese anogona kubatsira kuramba akamirira kusvika padiki. Tinoda kuti vafambi vagare vakachengeteka uye vagadzikane. ”
Vafambi vanokurudzirwa kuti vatarise mawebhusaiti enhandare nguva nenguva kuti ivandudzwe
"Mharidzo huru kune vanofamba mwaka uno wezhizha ndeyekutarisa nhungamiro yakapihwa pawebhusaiti yedu yendege nekukurumidza, uye nekudzokorora," kuraira Weiss. Kuti zviwirirane nemwaka unosvika wepamusoro, www.frankfurt-airport.com ine chinhu chitsva: iyo Mufambi Mubatsiri. Izvi zvinosanganisa ruzivo rwese rwakakosha munzvimbo imwechete. Inopa matipi, kuraira, uye mitemo yekongiri mukutevedzana kwezvakaitika, zvinoenderana nematanho enhanho murwendo rwevatakurwi - kubva pamatanho ekutanga ekuronga, kurongedza mukwende, kuronga kufamba kuenda kunhandare yendege, kugadzirira kudzoka rwendo. Sekutaura kunoita manejimendi, chinongedzo chakakura asi, nekuda kwedenda, zvese zvakakosha uye zvinonyanya kubatsira. Anosimbisa achiti: “Mitemo yakawanda inogona kuchinja nekukurumidza. Saka gore rino, munhu wese anorayirwa kuti agare achitsvaga zvekuvandudzwa: Chii chandinofanira kuita? Ndeapi magwaro andinoda? Ndinofanira kuzvibata sei? Uye mhinduro dzinosiyana kubva pamutyairi kuenda kune mumwe, zvichienderana nehurongwa hwavo hwekufamba. ”
Zvese zvinyorwa zvekupa
Chinhu chakakosha magwaro ekufamba. Kune dzakawanda nzvimbo, pasipoti chete kana kadhi reID hazvichakwanise. Zvichienderana nehutano hwavo, vafambi vangangoda humbowo hwepamutemo hwekubaiwa, kupora, kuyedzwa kana kuiswa wega - kungave nekunyora kana fomu yemagetsi. "Zvinyorwa zvakawanda zvichafanirwa kupihwa kakawanda, saka zvinokurudzirwa kuti zvinhu zvese zvive zvakarongeka uye zviwanikwe zviri nyore kumhuri yese," anosimbisa Weiss. Izvi zvinonyanya kukosha kutarisa-mukati uye kutonga pamuganhu. Nyika zhinji zvakare dzinoraira pre-kunyoresa usati wapinda. Izvi zvinowanzo kupedzwa manhamba.
Rongedza kurudyi, uye deredza rako rekutakura mukwende
Sekusimbisa kwaWeiss: "Pamusoro pezvinodiwa zvitsva zveCovid-19, mitemo iripo yekutakura zvinhu ichiri kushanda uye haifanire kukanganwika." Muchirevo chechinyorwa ichi zvakare, iyo yepamhepo Yekufamba Mubatsiri anogona kubatsira. Kune yakasarudzika mirau yezvinhu zvakawanda, zvinosanganisira zvinwiwa, mishonga, yekuchenesa maoko, zvinhu zvine njodzi, zvemagetsi - kunyanya mapaketi ebhatiri, e-midzanga nemabhangi emagetsi. “Isainzi pachayo. Saka tinokurudzira kuti vafambi vaone kuti vanonyatsoziva zviripo kuti vadzivirire kushamisika kusingafadzi uye kunonoka kuchengeteka, ”vanopa zano. Uyezve: “Rwendo rwekufamba kunoita kuti zvinhu zvive nyore. Teerera nemirairo yendege yako maererano nemikwende uye chengetedza zvinhu zvako zvekutakura kusvika padiki pane. Zvakanakisa pane zvese chinhu chimwe chete pamunhu. Izvi zvinoreva kunetswa kushoma kwauri iwe nevashandi vekuchengetedza. ”
Ronga rwendo rwako kuenda kunhandare uye nguva yako ipapo
Nekuda kwehosha iyi, vafambi vazhinji vari kutyaira kuenda kunhandare kwete kushandisa zvifambiso zveruzhinji. Kune avo vanoda kupaka mota dzavo kunhandare yendege kwenguva yakareba yerwendo rwavo, zvinokurudzirwa kunyorera nzvimbo mugaraji rekupedzisira pamberi. Izvi zvinogoneka online pa www.masaisrpa.ro. Vapfuuri vanofanirwa kusvika kuchiteshi kwemaawa maviri vasati vaenda, uye tarisa pamhepo vasati vabva kumba.
Ndichiri panhandare, chifukidzo chekumeso chinofanirwa kupfekwa nguva dzese. Inofanirwa kunge iri FFP2 kana yekuvhiya mask, inovhara zvese muromo nemhino. Izvi uye nezvimwe zvigadzirwa zvehutsanana zvinowanikwa munhandare yendege. Vafambi vanofanirwa kuve neinenge imwechete yekumeso kumeso navo.
Iko kurerutswa kwezvirambidzo zve coronavirus zvinoreva kuti zvimwe zvitoro neresitorendi zvakavhurwa kuFrankfurt Airport. Vapfuuri nevashanyi vanogona kuve nechokwadi chese akakosha zvigadzirwa nemasevhisi, kusanganisira chikafu nezvokunwa, mishonga yemutero, yekutenga-basa, kubhadharira mota uye kuchinjana mari. Maawa ekuvhura uye kuwanikwa kunobva pane huwandu hwevatakurwi. Chero ani anotsvaga chimwe chinhu chaicho anofanirwa kushanyira webhusaiti yendege kuti awane ruzivo asati asvika. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kudyiwa kwechikafu nekumwa kunotenderwa munhandare yendege - asi kuti chero chekufukidza kumeso chinofanira kungobviswa kwenguva pfupi, uye chinhambwe chakachengeteka chinofanira kuchengetedzwa kune vamwe.
"Kuchengetedza kwakafanana kunofanirwa kutorwa pamwe nedzimwe nzira dzekudzivirira hutachiona," anonyevera Weiss. "Isu takashandisa matanho akati wandei, akadai sekuchengeta-kwako-kure makiki, nzvimbo dzekuchenesa maoko, zvigaro zvakavharika uye zvidzitiro." Asi ibasa revatakuri vedu kutevedzera. ”
Kuedzwa kunowanikwa munzvimbo yese yendege
Ikozvino kune akati wandei coronavirus bvunzo nzvimbo kuFrankfurt Airport. Iwo ari munzvimbo mbiri, uye mubhiriji revanofamba netsoka kuenda kuchiteshi chechitima-kure-kure. Zvakare, kune zvekare sarudzo yekutyaira-kuburikidza nemiedzo pamwe chete nekutarisa mukati uye kutakura kwemitoro muTerminal 1 manheru manheru pamberi pendege. Zvekare, iyo yepamhepo Yekufamba Mubatsiri anogona kupa imwezve ruzivo. "Zvisinei, mimwe miedzo inofanirwa kuverengerwa pachine nguva uye unofanirwa kupa mvumo yenguva yekuwedzera inodiwa," anoyambira Weiss. Anopedzisa achiti: "Wateedzera kuraira kwedu kwese here? Ipapo rwendo rwakasununguka kuenda kunzvimbo yako yezororo rakamirira. ”